[औपचारिक] dr.fone टुलकिट - एन्ड्रोइड डाटा इरेजर: पूर्ण Android मा सबै मेटाउन र तपाईँको गोपनीयता सुरक्षित
dr.fone टुलकिट - एन्ड्रोइड डाटा इरेजर
पूर्णतया Android मा सबै मेटाउन र तपाईँको गोपनीयता सुरक्षित
सरल, क्लिक-मार्फत प्रक्रिया।
आफ्नो Android पूर्ण र स्थायी रूपमा हटाउन।
फोटो, सम्पर्क, सन्देशहरू, कल लग र सबै निजी डेटा मेट्नुहोस्।
सबै Android उपकरणहरू बजार मा उपलब्ध समर्थन गर्दछ।
यो निःशुल्क प्रयास किन्नुहोस
सरल मेटाउने वा कारखाना रिसेट स्थायी Android मा डाटा मेटाउन छैन। नष्ट डाटा अझै पनि उपलब्ध प्रविधि संग पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड डाटा इरेजर आफ्नो गोपनीयता स्थायी रूपमा मेटाइएका फाइलहरू मेटाएर ब्राउजिङ इतिहास, क्याश खाली र आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा द्वारा सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
बिक्री वा तपाईँको Android फोन दान?
पहिलो आफ्नो व्यक्तिगत डाटा नामेट एन्ड्रोइड डाटा इरेजर प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्णतया आफ्नो Android फोन मा सबै मेटाउन।
तपाईंको प्रयोग Android फोन वा ट्याब्लेट बिक्री? स्थायी रूपमा आफ्नो Android मा सबै मेटाउन र आफ्नो गोपनीयताको रक्षा गर्न एन्ड्रोइड डाटा इरेजर - dr.fone टुलकिट प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण Android फोन सफा हटाउन।
परम्परागत कारखाना डाटा रिसेट मा फोन 100% आफ्नो व्यक्तिगत डाटा सफा छैन। एन्ड्रोइड डाटा इरेजर तपाईं एन्ड्रोइड उपकरण सफा हटाउन र कारखाना सेटिङहरूमा यसलाई फिर्ता प्राप्त गर्छ
Android फोन मा डाटा को सबै प्रकार मेट्नुहोस्।
एन्ड्रोइड डाटा इरेजर जस्तै फोटो, सन्देश, सम्पर्क, कल लग, टिप्पणीहरू, पात्रो, र अनुप्रयोग डाटा, आदि रूपमा निजी डेटा, मेटाउन मदत गर्छ
पुरानो Android फोन मेटाउन र आफूलाई बचाउन।
सही उपकरणले, पुरानो Android फोन मा डाटा अझै पनि पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हटाइयो। र 1 10 को बाहिर संसारमा पहिचान चोरी शिकार छ। पूर्ण तिनीहरूलाई सफा wiping आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित गर्नुहोस्।
Android उपकरणहरू विभिन्न एन्ड्रोइड सिस्टम मा चलिरहेको समर्थन हजारौं।
मूलतः dr.fone टुलकिट - एन्ड्रोइड डाटा इरेजर सबै Android उपकरणहरू बजार मा उपलब्ध समर्थन गर्दछ। एक पटक नयाँ उपकरणहरू उपलब्ध छन् यसलाई थप समर्थन हुनेछ।
तपाईंको Android मा व्यक्तिगत डाटा को सबै खालका मेटाउन
तपाईं आफ्नो Android मा फोटो, सन्देश र संलग्नहरू, सम्पर्क, कल इतिहास, टिप्पणीहरू, पात्रो, रिमाइन्डर र अनुप्रयोग डेटा, आदि स्थायी सहित सबै निजी जानकारी हटाउन एन्ड्रोइड डाटा इरेजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
किन dr.fone टुलकिट छनौट
सरल, छिटो, र प्रभावकारी।
मिट डाटा कुनै पनि उपकरण द्वारा पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कुनै डाटा राखिएको वा प्रक्रिया चलिरहेको बेला लीक।
प्रयोग गर्न सबैका लागि सहज इन्टरफेस।
सबै Android उपकरणहरू समर्थन
एन्ड्रोइड डाटा इरेजर बजार मा सबै उपलब्ध Android उपकरणहरू समर्थन गर्दछ। तपाईं सैमसंग, HTC, सोनी, मोटोरोला, गुगल नेक्सस, एलजी, वा ZTE, आदि छन् र के Android संस्करण आफ्नो फोन चलिरहेको छ कुनै कुरा छैन, एन्ड्रोइड डाटा इरेजर तपाईं स्थायी रूपमा फोनमा सबै मेटाउन मद्दत गर्छ।
एन्ड्रोइड डाटा इरेजर कसरी काम गर्छ?
एन्ड्रोइड डाटा इरेजर तपाईं आफ्नो डेटा पूर्ण पढ्न नसकिने प्रस्तुत र त्यसपछि पूर्ण सारा डिस्क सफा गर्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि, प्रयोगकर्ताहरूले स्वयं फोन afterword मा कारखाना रिसेट गर्न आवश्यक छ। यी दुई सञ्चालन तपाईँको डेटा जोकोहीले फेरि पुन: प्राप्त गर्न सक्षम हुने छैन।
एन्ड्रोइड डाटा इरेजर पूर्ण फोनमा सबै डाटा मेटाउन गर्दैन?
हो, एन्ड्रोइड डाटा इरेजर पूर्ण र स्थायी रूपमा अप सबै व्यक्तिगत सम्पर्क, सन्देशहरू, फोटो, कल लग, पात्रो, अनुप्रयोग र अनुप्रयोग डाटा, आदि सहित फोनमा डाटा, सफा
के म जब म एन्ड्रोइड डाटा इरेजर प्रयोग गर्न ध्यान गर्नुपर्छ?
कृपया फोन विच्छेद वा सम्पूर्ण प्रक्रिया चलिरहेको बेला कुनै पनि अन्य एन्ड्रोइड व्यवस्थापन सफ्टवेयर खोल्न छैन। र अन्त मा, आफ्नो फोनमा कारखाना रिसेट गर्न एन्ड्रोइड डाटा इरेजर मा निर्देशन पालना गर्नुहोस्।
के Android उपकरणहरू एन्ड्रोइड डाटा इरेजर समर्थन गर्छ?
हाल एन्ड्रोइड डाटा इरेजर सबै Android उपकरणहरू बजार मा उपलब्ध समर्थन गर्दछ। र एक पटक जारी गर्दै यसलाई चाँडै थप नयाँ Android उपकरणहरू समर्थन हुनेछ।
" Android को लागि Wondershare dr.fone टुलकिट विशेषज्ञता सबै स्तर को प्रयोगकर्ता द्वारा नेभिगेसन हुन सक्छ कि इन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलो छ। यो हल्का छ र प्रणाली संसाधन को ठूलो रकम प्रयोग गर्दैन। समग्रमा, यो बरु उपयोगी उपकरण किरा तपाईं बाहिर प्राप्त गर्न सक्छ यसलाई आफ्नो Android उपकरणको लागि डाटा रिकभरी आउँदा केही टाँसिएको अवस्थाको। थप जान्नुहोस् >>
- filehippo देखि, एक शीर्ष सब सफ्टवेयर डाउनलोड साइट मात्र शीर्ष सब सफ्टवेयर प्रदान।
यो काम गर्दछ !!
dr.fone मेरो Samsung पूर्ण एक बांध्नु बिना S5 साफ। अब म मेरो जानकारी बारेमा चिन्ता बिना यो बेच्न सक्नुहुन्छ।
एन्ड्रोइड डेटा रबड साँच्चै सजिलै काम गरे।
सुरुमा म संदेह थियो। तर dr.fone पूर्ण काम बाहिर जान्छ। राम्रो!
शीर्ष7एन्ड्रोइड डाटा इरेजर सफ्टवेयर स्थायी तपाईंको पुरानो एन्ड्रोइड खाली गर्न
शीर्ष6एन्ड्रोइड डाटा मेटाउने अनुप्रयोग तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित गर्न
सैमसंग ग्यालेक्सी / नोट मेटाइयो फोटो कसरी पुन: प्राप्त गर्न
बाट सैमसंग मोबाइल फोन डाटा रिकभर
सैमसंग ग्यालेक्सी अचानक मृत्यु कसरी समाधान गर्न: मृत्यु को काला पर्दा
के गर्न2तरिका सैमसंग डाटा रिकभरी तपाईंलाई थाह छ
Samsung फोटो पुन:
तपाईंको सैमसंग सेल फोन बाट मेटिएको संदेश कसरी पुन: प्राप्त गर्न
Samsung फोनहरुको मेटिएको सामग्री पुन: प्राप्त गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
एन्ड्रोइड डाटा निष्कर्ष (क्षतिग्रस्त उपकरण)
भङ्ग Android फोन र5मिनेटमा ट्याब्लेटको देखि उद्धार डाटा।
डाटा गुमाउनुपर्ने बिना Android उपकरणहरू देखि बन्द स्क्रिन हटाउन।
कम्प्युटरमा छानेर जगेडा आफ्नो Android डाटा र आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई बहाल।